मानिसहरू आकर्षित गर्न जादुई तरिका - हिज्जे को चुरोट र वोदका मा हिज्जे
बौद्धिक विकास, Mysticism
रहस्यमय र enigmatic जादू लामो धेरै मान्छे को लागि वृद्धि ध्यान विषय भएको छ। केही लागि यो अक्सर व्यवहार मा लागू गरियो, एक गम्भीर विज्ञान छ, र कसैले यसलाई एक कठिन अवस्था एउटा समाधान खोज्न मद्दत गर्छ। कुनै पनि मामला मा, आफ्नो खण्डहरू धेरै निरन्तर उच्च मांग गर्दै छन्। अक्सर, जादुगर र sorcerers गर्न समस्या एक मानिस आकर्षण गर्न यस्तो तरिकाले, प्रेम मा समाधान वा आगो-बुझाने पूर्व आवेग सल्काउनुभयो गर्न अनुरोध गरिन्छ। आफ्नो आचरण सम्भाव्य छ र राम्रो परिणाम दिन्छ रूपमा धेरै युवा महिला एक चुरोट मा हिज्जे जस्तै यस्तो जादुई अनुष्ठान रुचि राख्नुहुन्छ। निस्सन्देह, एक चुरोट गरेर हिज्जे भएको भने मात्र सम्भव छ प्रिय मानिस धूम्रपान गर्दछ। म यो अनुष्ठान मा कालो जादू को कुनै तत्व हो भनेर थप्न, र केवल शुद्ध प्रेम ऊर्जा सकारात्मक भावना र भावना आकर्षित कि प्रयोग गर्नुपर्छ। यो संस्कार ती प्रकार कुरा एक आकर्षण व्यक्ति संलग्न छ जो मध्ये एक छ, तर त्यहाँ छ र यसको सुविधाहरू विस्तार उल्लेख लायक छन्।
दुवै साझेदार निम्न तरिका गरिन्छ धुवाँ जसमा ती जोडी लागि चुरोट मार्फत Privorot। को अनुष्ठान चुरोट को एक नयाँ प्याक, प्रेम वस्तु हिज्जे रुचि एक ब्रान्ड किनेको गर्न पनि रातो रूमाल, रातो मैनबत्ती र एक तस्वीर, सँगै जोडी देखाउँदछ आवश्यक छ। त्यहाँ कुनै पनि छ भने, दुई अलग तस्वीर, एक पाना मुद्रण फिट। चित्रहरु दिइएको अवस्था अनुरूप, प्रेम को रुनिक प्रतीक कोरिएका हुन्छन्। यस चुरोट मा हिज्जे आवश्यक मा खर्च छ बढ्दै चन्द्र शुक्रवार रात।
को समारोह को लागि सबै भन्दा राम्रो स्थान जोडी को संयुक्त बक्स हुनेछ, तर एक घनिष्ठ सम्बन्ध अवस्थित छैन भने, त्यो उनको ओछ्यानमा मा अनुष्ठान गर्न सक्दैन। त्यसैले, एक धातु ट्रे राख्नु, यो रातो रुमाल, त्यसपछि एउटा फोटो र चुरोट को एक प्याक, छेउमा मैनबत्ती रोशनी छ। लेख्न जरूरी स्पार्क मा: "मानिसको नाम" "केटी नाम" को धेरै रुचाउनु छ। आमिन! को मोमबत्ती रोशनी छन्, र अन्य सबै प्रकाश स्रोतहरु बन्द। Palms चुरोट ढाकिएको र हिज्जे पढ्न हुनुपर्छ "तपाईं र मलाई एकताबद्ध लागि नीलो धुवाँ हुनेछ। यो चुरोट को धुवाँ कर्ल छैन, र हाम्रो हृदय तातो प्रेम मा खन्याइदिएकी। आफ्नो प्राण मेरो लागि aspires दिनुहोस् तातो र भावुक प्रेम हृदय (पुरुष) रोशनी (केटी) गर्न दिनुहोस्। Matchmaker बन्न हामी दुई धूम्रपान। आमिन! आमिन! आमिन! "
यी शब्दहरू सबैभन्दा निष्कपट अर्थमा संग नौ पटक पढ्न छन्। यस मैनबत्ती अन्त बाहिर बल्छ सम्म पर्खनु पर्छ र तकिया मुनि उनको एउटा फोटो राखे, र एक रूमाल मा र्याप र लगाउने चुरोट को एक प्याक सधैं तपाईंसँग गर्न सकेसम्म आफ्नो प्रिय व्यवहार छ। पहिलो एक चुरोट लिन्छ, र दोस्रो उहाँलाई दिइएको छ। यो सँगै सारा प्याक धूम्रपान गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। एक चुरोट मा यस्तो प्रेम हिज्जे कुनै थप तीन पटक भन्दा, त्यसपछि छ महिना लागि ब्रेक आवश्यक सकिँदैन।
वोदका हिज्जे छैन कम प्रभावकारी र। एक मानिस धुम्रपान गर्दैन भने त्यो कि अवस्थामा हुनेछु। को वोदका लक उनको कपाल को, ठ्याक्कै रगतको नौ घटेको को नङ संग राख्नु र कटौती गर्न आवश्यक छ र घन्टी औंला, र ऊर्जा सूचना को खण्ड ग्लास चोट छैन कि, वोदका एक विस्तृत कचौरा मा हालिएको गर्न सकिन्छ। तपाईं जादु शब्द भन्न पछि, वोदका बोतल फिर्ता खन्याइन् र तपाईं उनको प्रेमी रम्न अवसर सम्म, त्यसपछि सम्म लुकाउनुहोस्।
म एक चुरोट मा प्रेम हिज्जे रूपमा थप्न गर्नुपर्छ र वोदका हिज्जे कुनै पनि, पनि सानो विवरण गुमाउने बिना धेरै ध्यान दिएर प्रदर्शन हुनुपर्छ। अनुष्ठान सफल गर्न, यो मान्य रूपमा, इच्छित प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। आफ्नो प्रिय कुराकानी गर्न भद्रताका साथ सबै quarrels जोगिन र सम्बन्ध स्पष्ट। र सकारात्मक भावना मा नै समायोजन गर्न - राम्रो संगीत सुन्न र राम्रो मान्छे संग कुराकानी। यो प्रेम हिज्जे सकारात्मक ऊर्जा मा सबै भन्दा राम्रो तरिका प्रभाव छ र उहाँले काम गर्न सुरु हुनेछ।
अनुपालन को माध्यम हुनेछ, चन्द्रकला र जादुई वर्ण द्वारा घरमा पैसा आकर्षित
जादू र जादूटुना के हो? शब्द को अर्थ "जादूटुना"
नाम Damian को गोप्य अर्थ र वर्ण आफ्नो प्रभाव
विवेक के हो?
तपाईं gnats को खानको एलर्जी अनुभव भने के गर्ने?
एक मोडेम को लागि ऐन्टेना कसरि गर्ने
Chamaedorea elegans (Chamaedorea Elegans), वा पाम कोठा: हेरविचार घर र फोटो मा
कसरी, एक्सेल लाइन मा एक पंक्ति बनाउन तिनीहरूलाई सार्न र उचाइ समायोजन?
हिप्सको भोल्युम कसरी घटाउने?
Ksenia Sobchak मैक्सिम Vitorgan पति
नाम - यो के हो? लेख्न र प्रश्न यो संक्षिप्त प्रयोग गर्न कसरी
को समस्याहरूको र दुःख को Patroness: पवित्र भर्जिन को प्रतिमा
झिंगा को ताप मूल्य के हो? तिनीहरूले कसरी उपयोगी छन्?
अस्पताल, केमेरोभो क्षेत्र। सेवाहरूको विवरण
ध्वनि क्लब कसरी छनौट गर्ने?